Uluhlu lokuLondolozwa kweWordPress: Uluhlu lokuGqibela lweeNgcebiso, izixhobo, kunye neZenzo eziBalaseleyo | Martech Zone
Uluhlu lokuLondolozwa kweWordPress: Uluhlu oluGqityiweyo lweeNgcebiso, izixhobo, kunye neZenzo eziPhambili
NgoLwesihlanu, Julayi 20, 2018 NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 Douglas Karr
Kanye namhlanje bendidibana nabathengi bethu ababini malunga nokufakwa kwabo kwi-WordPress. Ndingumthengisi omnandi nge-agnostic malunga neenkqubo zolawulo lomxholo. Ukuthandwa kweWordPress ngokubanzi kuyincedile kuba uninzi lwabantu besithathu luya kudibana nayo, kwaye imixholo kunye ne-plugin ecosystem ilungile njengoko unokufumana. Ndiphuhlise ezimbalwa Plugin WordPressMna, ukunceda abathengi bethu kunye nenkxaso kwindalo.
Oko kwathethi, akukho ngaphandle kwemicimbi yayo, nangona. Ngenxa yokuba ithandwa kangaka Inkqubo yolawulo lomxholo, I-WordPress ekujoliswe kuyo ngokuyintloko ngabagculi kunye nogaxekile kuyo yonke indawo. Kwaye, ngenxa yokusebenziseka kwayo ngokulula, kulula kakhulu ukwakha ufakelo oluqunjelweyo olwenza ukuba iisayithi ziyeke ukuma. Ngokusebenza kubaluleke kakhulu kule mihla ekusebenzeni nasekusebenziseni ukukhangela, oku akuhlali kakuhle kwiindawo ezininzi.
Oko kwathethi, kulungile ukuba kukho abantu abanjengoBigrockCoupon abaphuhlise infographics ebanzi yokunceda abalawuli beWordPress. I-infographic yabo, Uluhlu lokuHlola lweWebhusayithi yeWordPress, ineengcebiso ezingaphezulu kwama-50 kunye nezenzo zabanini bewebhusayithi zokucwangcisa ukuhamba kwabo emsebenzini ukukhusela imiba.
Nalu uLuhlu lwam loLondolozo lweWordPress
I-infographic inezinto ezimbalwa, kodwa ukuba uyazigubungela uhamba phambi kwabakhuphisana nabo! Ndigcina uluhlu lwee Iiplagi ezilungileyo ze-WordPress Sivavanyile saza sayiphumeza… qiniseka ukuba uyayibhukisha!
Ukugcina indawo yogcino lwedatha yakho yeWordPress -Ngaphambi kokuba wenze nantoni na ngeWordPress, qiniseka ukuba unee-backups ezinkulu ezigcinwa zingasebenzi. Kungenxa yoko le nto sisebenzisa i-WordPress Managed Hosting nge Flywheel. Banokuzenzekelayo kunye nokukhuseleka ngesandla ngokuchofoza okukodwa ukubuyisela. Akuzange kufuneke siqwalasele okanye senze nantoni na… babehlala bekhona!
Nika iWindowsPress uVavanyo Sebenzisa indawo yakho Uvavanyo lweWP kwaye uyakufumana itoni yezinto zokucoca indawo yakho. Ayisiyiyo yonke imicimbi eya kukuchaphazela kakubi-kodwa lonke ulwaziso oluncinci!
Ukuphicothwa kweWebhusayithi Sebenzisa Iphepha likaGoogle elibhaliweyo ukuhlalutya amaphepha kwimicimbi yesantya.
Jonga iiKhonkco ezaphukileyo- Ndisebenzise inani lezixhobo ezikwi-Intanethi, andikaze ndifumane nto ibhetele kune Ukukhwaza iFrog SEO Spider kwiindawo ezirhubuluzayo zonxibelelwano olaphukileyo. I-infographic icebisa ukongeza iplagi ukwenza oku, kodwa oko kungathoba intsebenzo yakho kwaye kukufake engxakini kunye nomphathi wakho.
Yalathisa kwakhona i-301 kwiiKhonkco ezaphukileyo- Ngaphandle kwabaxumi bethu bebanjwe WPEngine, Nto leyo eye ulawulo yayo ukufumana enye indlela yabo, bonke abaxhasi bethu silubaleke Ukuphinda usebenze kwakhona iplagi.
Ukuphucula iWindowsPress, i-Themes, kunye neeplagi kwiinguqulelo zamva nje- Oku kubalulekile kule mihla kunikwe imiba yezokhuseleko. Ukuba ungomnye waba bantu banexhala lokuphucula iplagi inokuyaphula indawo yakho, unokufuna ukukhangela iplagi entsha. Bonke abaphuhlisi banethuba lokuvavanya imixholo yabo kunye neeplagi kwi-WordPress ezayo.
Cima Izimvo zogaxekile - Ndingacebisa kakhulu ukufumana jetpack kunye nokubhalisela iAkismet ukunceda koku.
Cima imixholo engasetyenziswanga, imifanekiso, kunye nokuSebenza, iiPlagi ezingasetyenziswanga- Iiplagi ezisebenzayo zongeza enye ikhowudi kwindawo yakho xa upapasha. Esi sihloko singasicothisa isiza sakho ukuze indlela yakho eyiyo kukwenza ngaphandle.
Cacisa iinguqulelo kunye nenkunkuma - Ngokuncinci isiseko sedatha yakho, ngokukhawuleza imibuzo yokutsala umxholo. Qiniseka ukuba ucoce iphepha kunye neenguqulelo zeposi kunye namaphepha asusiweyo kunye nezithuba rhoqo.
Ukhuseleko lweWebhusayithi - Flywheel Asingabo abalandeli abakhulu beeplagi zokhuseleko, ndingacebisa ukuba uhambe nomninimzi omkhulu endaweni yoko. Iqela labo lihlala ngaphezulu kwezokhuseleko ngaphandle kokusebenza ngaphezulu kweplagi.
Lungiselela iitafile zoVimba weDatha- Ukuba ufake imixholo embalwa kunye neeplagi, uninzi lwazo lushiya idatha ngasemva kwindawo yogcino lwedatha. Oku kungongeza kwimicimbi yokusebenza kunye nokwandisa amaxesha okulayisha ukusukela ukuba idatha engasetyenziswanga isenokubuzwa kwaye ilayishwe nokuba iyabonakala okanye ayibonakali. Iplagi edwelisiweyo indala kakhulu, ndingacebisa Ukucocwa kweDatabase ePhambili.
Ukulungiswa kwemifanekiso- Imifanekiso engacinezelwanga inokuchaphazela kakubi ukusebenza kwendawo yakho. Siyathanda Kraken kunye neWordPress yayo yokucinezela imifanekiso yethu.
Jonga ukungena kwi-imeyile kunye neefom zoNxibelelwano ngokuSebenza- Gravity Forms Sakha safumana isikhalazo kumntu oza kuba ngumthengi ukuba indawo yabo esandula ukumiliselwa ineefom kodwa khange bafumane zikhokelo. Xa sijonga indawo, safumanisa ukuba iifom yayiziifom zedummy kwaye nabani na onokunxibelelana nenkampani angenisile kodwa idatha ayiyanga ndawo. Kubuhlungu! Siyisebenzisa kunye nabasebenzisi BONKE!
Ukuphonononga uGoogle Analytics -Kusoloko kumangalisa kubaxhasi bethu ukuba mbalwa kangakanani amaphepha abo abonakaliswe ziinjini zokukhangela okanye zifundwe nazindwendwe. Sixabisa ngokukhethekileyo Ukuhamba komsebenzisi, ingxelo ebonisa indlela abantu abahamba ngayo kwindawo yakho.
Jonga iGoogle Console -Uhlalutyo lubonisa kuwe kuphela umntu ofike kwindawo yakho. Kuthekani ngabantu abajonge indawo yakho kwisiphumo seinjini yokukhangela? Ewe, iiWebmasters sisixhobo sokubona indlela uGoogle ayijonga ngayo indawo yakho yezempilo, ukuzinza, kunye neziphumo zokukhangela. Gcina iliso kwiimpazamo zedatha kwaye uzame ukuzilungisa njengoko zivela.
Hlaziya umxholo wakho -Ukubhalwa kwesi sithuba, ndihlaziye ubuncinci izithuba ezilishumi elinambini endizichazayo ukuqinisekisa ukuba zigcinwa zihlaziyiwe. Uyakumangaliswa yimicimbi kwindawo yakho evelayo-njengonxibelelwano kwiindawo ezingaphandle ezingasekhoyo, imifanekiso enokuba neengxaki, kunye nomxholo ophelelwe lixesha. Gcina umxholo wakho umtsha ukuze kwabelwane ngawo, kulungelelaniswe kunye nexabiso kubaphulaphuli bakho.
Uphengululo lwesihloko kunye neMeta Inkcazo yeethegi - Indlela elungileyo yokwandisa indawo yakho kwiinjini yokukhangela ukufaka kunye nokumisela iiplagi. Izihloko ziya kunceda iphepha lakho lifakwe kwisalathiso ngokufanelekileyo kumxholo wokutyhilwa kwalo kunye neenkcazo zemeta ziya kulukuhla abasebenzisi beenjini yokukhangela ukuba bacofe kwiziphumo zakho zoluhlu.
Nantsi i-infographic epheleleyo eneengcebiso ezingaphezu kwe-50 kunye nezenzo ezivela Imvu!
tags: I-301 iqondisa kwakhona iiKhonkco eziNgekhoyoUkugcina indawo yogcino lwedatha yakho yeWordPressShintsha amagama akho okugqithisaJonga iiAdsense kwiintengiso kwiWebhusayithi yakhoJonga amakhonkco onxibelelwanoJonga ukungena kwi-imeyile kunye neefom zoNxibelelwano ngokuSebenzaJonga amakhonkco aphukileyoJonga izixhobo zikaGoogle Console (umphathi weWebhu)Jonga izixhobo ezisetyenzisiweyoJonga i-Sidebar Links kunye neeBlogrollsJonga amakhonkco onxibelelwanoJonga ubalo lweWebhuJonga uKhuseleko lweWebhusayithiJonga iiKhonkco zakho zokuKhuphelaJonga iiFidi zeSayithi lakhoJonga ukuKhangela kweSiza sakhoSula inkunkumaChaza ixesha lokuGcina ngokuZenzekelayoCima Izimvo zogaxekileCima iiPlagi ezingafunekiyoCima imixholo engafunekiyoKhubaza uhlaziyo oluzenzekelayo lweWindowsPressKhubaza iNkqubo yokuLungisaKhubaza ukuKhangela kunye nokuSilelaUkuSebenza kweMifanekisoYandisa iMilinganiselo yeMemoriUkukhangela i-malwareUkucoca iifayile zeMediaNokwandisa iitafile zedathaUkuthumela iSondloHlaziya iNtloko yeBhanari kunye neMifanekiso yeSayithiSusa iiDrafti kunye noPhononongo lwePosiSusa abalawuli beWebhusayithi abangasebenziyoHlaziya ukuHamba kunye neMimandlaPhendula kwiiNkcazoUkuphonononga uGoogle AnalyticsUkuphonononga isihloko seMeta kunye neethegi zenkcazo zeMetaUkuphonononga kwi-On-Page-SEOHlaziya iphepha lakho malunga nathiQalisa indawo ngokuKhangelwa kweWPThatha ii-Backups zemihla ngemihlaUvavanyo lwesikhangeli kunye nokuhambelana kwesixhoboHlaziya umhla weLungelo lokushicilela kwiFooter yakhoHlaziya umxholo wakhoHlaziya iiplagi zakho zeWordPressHlaziya isihloko sakho seWindowsPressHlaziya iiWijethi zakho zeWordPressUkuphucula iWindowsPress kwiinguqulelo zamva njeUkuqinisekisa iwebhusayithi yakhoUkhuseleko lweWebhusayithiUkuphicothwa kweWebhusayithiUhlolo lwe-wp
Iingcebiso ezi-7 ze-Ecommerce zokwenza uMxholo oguqukayo
Ukwakha iBali leBali: Iinqobo ezi-7 zeThemba lakho eliShishini lakho lixhomekeke